Gaadhi Ku Dhacay Duleedka Lughaya Oo Sababay Khasaare dhimasho iyo Dhaawac isugu Jira | Araweelo News Network (Archive) -
Lughaya(Araweelo News Network) Shil gaadhi oo ka dhacay duleedka Lughaya ee wadada isku xidha Djibouti iyo Somaliland ee dhinaca
Xeebta ayaa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah.
Haweenay magaceeda lagu sheegay Aamina Maxamed Cabdi, isla markaana u dhalatay dalka Djibouti ayaa ku dhimatay shilka Baabuurkaa, waxaana dhaawac halis ah ka soo gaadhay sedex qof oo ka mid ahaa rakaabka saarnaa gaadhiga, kuwaas oo magacyadoodu lagu sheegay Axmed Xaamud, Khaalid Jaamac iyo Nasriin Maxamed Xasan.
Sidoo kale Afar qof oo kale oo ka mid ahaa Rakaabka ayaa dhaawacyo fududi soo gaadheen, sida uu warbaahinta u xaqiiyay Maayarka Degmada Lughaya C/llaahi Cali Nuur oo isaga iyo masuuliyiin kale gurmad ugu tagaan goobta shilku ka dhacay oo qiyaastii 8 Km u jirta Lughaya.
Maayarka lugahaya ayaa sheegay in Gaadhigu u socday dhinaca dalka Djibouti oo ka tegey Magaalada Hargeysa ka hor intii aanu shilkaasi dhicin, wuxuuna xusay inay dadkaa dhaawaca ah geeyeen MCH ku yaal Lughaya oo lagu dawaynayo, balse waxa uu sheegay in aanay maamul ahaan awoodin inay dadkaa adeegyada gurmadka caafimaad ee ay u baahan yihiin ka helaan Degmada Lughaya oo sida uu sheegay aan awoodi Karin. Sidaa awgeed loo baahanyahay in gurmad ay ka helaan wasaaradda Caafimaadka Somaliland iyo xukuumadda dhexe.